ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမီးတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမီးတဲ့
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jan 31, 2012 in Myanma News | 24 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမီး မခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ ပုံဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မွေးစားထားတယ်လို့လဲပြောတယ်။ သူက နိုင်ငံခြားမှာ The Lady မင်းသမီး Michelle Yeoh နဲ့အတူတူပရဟိတတွေ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာလည်းသူ့အဖွားရဲ့ ကုမဏီ တွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့။ တစ်ပတ်မှာ2ခါ3ခါလောက်တော့ 2ပေစလောင်းကနေ ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ သတင်းအမြဲပါတယ်လို့ပြောတယ်။ ဘာလဲတော့မသိဘူး။ သိတဲ့သူများရှိရင်သူ့အကြောင်းပြောပေးပါလား။ တခါမှလဲမကြားဖူးဘူး။ အမေစုနားမှာနေ တာလဲတခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ တကယ်လားလဲသိချင်လို့ပါ။
ဟင့် .. တူလဲမတူဘူး ..
ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူးထင်တယ် ( ရမ်းပြောတာ )
ဟုတ်ရဲ့လား…. မတူဘူးနော်…. သက်သေခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြောပြမှယုံမယ်…. အခုတော့ ယုံဘူး…
သိပ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး…… ကြားမိတာ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးစားသမီးပါတဲ့
ကျနုပ် စိန်ပေါက်ပေါက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့ တစ်အူးတီးတဲသော မွေးစားမြေးဗျာ
နင့်ကိုသာ မွေးစားလို့ကတော့ ဒေါ်စုတော့ ဘီအီးဖိုးနဲ့မွဲမှာဘဲ
ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး နင့်လိုက်ထိန်းနေရမှာ
ဒါနဲ့ ဖရဲရဲ့မွေးစားမြေး မလုပ်ချင်ဘူးလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမီး ဟုတ်မဟုတ် မသိပါ ဤကား (၁)အချက်
နံပါတ်(၂) ဤကလေးမသည်ကား ပုရိသတို့ အကြိုက် ဟုတ်မဟုတ် မသိ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ချစ်စရာကောင်း၏ …
နောက်တစ်ခု လက်တို့လိုက်မည် ကျွန်ုပ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးစားသမက်ဖြစ်သည် …. ငှဲ လျောင်း ငှဲ လျောင်း …
ကာယကံရှင် များက ဘာမှမပြောကြသေးဘူး..
လုပ်ဇာတ်လား လုပ်စားလားမသိ ခုတလော ရေပွက်ရာ ငါးစားချနေကြတော့အမေစု က ဘာမှ မပြောသေးပါဘူး အမေစု ထုတ်ပေါ်ပြောတာလဲ မကြားဘူးပါဘူးခင်ဗျာ သားနှစ်ယောက်နဲ့မြေးတွေ ၇ှိတာတော့ သိပါတယ်
အင်းဟုတ်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာတော့အတော်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဆိုပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံလဲတော့မသိဘူး။
စာဥရေ ငါတို့လည်း မွေးစားသားဖြစ်ဖြစ် သမီးဖြစ်ဖြစ် မွေးရအောင်
ရွာထဲက ပီကင်းပြန် ဖော်ကြီးရဲ့သား ပေါက်ဖော်လေးကို မွေးစားရအောင်
မလိမ္မာလည်း တရုတ်ပြည်ကို ဥဖြတ်ပြီး ရောင်းစားတာပေါ့ဟယ်။
အဲ………အဲဒါတော့ ရုပ်နဲ့ လေ………
ဒီပုံက အခုသူ့လက်ရှိ အသက်ပုံဆိုရင် ယုံခြင်ပြန်ဘူး ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထိန်းသိမ်းခံထားရတာ နှစ်ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ။။။။။။။။။။။။
အထဲကနေဘဲ ပါးစပ်နဲ့ မွေးစားလိုက်လို့ ပြောရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး ….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပြောသရွေ့တော့ မရေမ ယ သေးသေးတင် တစ်ချောင်းငင် ယုံ .. မယုံ ..
နောက်ဆို.. နာမယ်ကြီးချင်ရင်.. အဲဒီလိုလုပ်ကြပေါ့..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. ကမ္ဘာတန်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်.. ပေါ်ပြုလာဖြစ်လွန်းတာမို့.. ကမ္ဘာအဆင့်ဆယ်ရီဘရိတ်တီလို့တောင်ပြောရမလိုပဲ..။
ဒါပေမဲ့.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. သားတွေချည်းမွေးထားတော့ သမီးအဖြစ်မွေးစားပေးပါဆိုပြီး.. မိတ်ဆွေရင်းတွေအပ်ရင်တော့.. . စိတ်ဝင်စားချင်စားမှာပေါ့..။
အဲဒါဆိုလည်း.. အခုအသက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး..။
ဒီပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေ … သူကြီးနဲ့ ခဏတော့ ပြောခွင့်ပြုပါနော်။
သူကြီး ခင်ဗျား …
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက် ဝက်ဘ်ဆိုက်က အပြောင်းအလဲလေးတွေ လုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမ တွေ့တဲ့ အပြောင်းအလဲက Member Login Page ပြောင်းထားတာပါပဲ သူကြီး။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ ပြောင်းထားသလဲဆိုရင် ပြောပြပေးပါလား ခင်ဗျာ။ Thakhin: Citizen Journalist ဆိုတာတော့ တွေ့ပါတယ်။
ဒုတိယ အပြောင်းအလဲကတော့ စောစောက ကိုဘလက်ရဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ပို့စ်မှာ ကွန်မန့်ပေးရင်းနဲ့ တွေ့လိုက်တာပါ။ ကွန်မန့်ကို ပြန်ဖျက်ဖို့၊ ပြန်ပြင်ဖို့ အချိန် ၄ မိနစ်ခွဲ ပေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ် သူကြီး။ အဲဒီလို ကွန်မန့်ကို ပြန်ပြင်ဖို့၊ ဖျက်ဖို့ အချိန်ပေးထားတာလေးကတော့ ကောင်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ခင်ဗျာ။
အဟီး … ကြွားတာတော့ ဟုတ်ဖူး .. တကယ်ပြောတာ … အမေစုမြေးက ဘယ်သူထင်တုန်း ….
etone ပါချင့် …
အဖွားနာမည် ဒေါ်စုကြည်ပါ (အောင်ဆန်း)မှာနေပါတယ် ချင့်
ဒါဆိုရင် အမေစု မြေးပါဆိုပြီး ဒါ့ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်လေ …
ဒေါက်တာကြီး ကိုတော့ သွေး မတိုးအောင် ဆေးကြိုတိုက်ထားပေါ့။။။။။။။။ :grin: :grin:
ကျွန်မဓါတ်ပုံကို ပြရန်မလို … ထမင်းအိုးဖင်ကို ကြည့်တောမူပါ အစ်ကို ….
ဒါဆို အိအိတုန်မဟုတ်ဘူး။ မဲမဲတုန်ပေါ့နော်။
တော်တော်မဲမှာ ( မွှားလို့ တော်တော်ချောမွှာပေါ့နှော် )
ကျွဲမ…. ဖင်ကိုမဟုတ်လား??????? တောအရပ်မှာပဲ ထမင်းအိုးဖင်က မဲတော့တာ…။
အင်ပေါ့နော်။း)းD